Senator Dhagdheer “ Sheekh Shaakiroow Shabaab la dagaalami-meyside Mushkilo ha noo keenin xil baad rabtaaye Qoor-Qoor sugo inta uu ka dagaayo Xilka. | Dayniile.com
Home Warkii Senator Dhagdheer “ Sheekh Shaakiroow Shabaab la dagaalami-meyside Mushkilo ha noo keenin...
Senator Dhagdheer “ Sheekh Shaakiroow Shabaab la dagaalami-meyside Mushkilo ha noo keenin xil baad rabtaaye Qoor-Qoor sugo inta uu ka dagaayo Xilka.
Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer ayaa markii ugu horaysay ka hadlay xaalada Galmudug iyo dagaalka haatan ay abaabulayaan Ahlu-Sunna, waxa uuna eedayn kala dul dhacay hogaanka ururka Ahlu-Sunna Waljamaaca.
Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer ayaa sheegay in Ahlusunna aysan u socon dagaal balse ay rabaan in ay Xil ku raadiyaan Xoog, waxa uuna ugu baaqay in ay Hubka soo wareejiyaan.
Waxa uu sheegay in Sheekh Shaakir iyo hogaankan kale ee Ahlu-Sunna aysan daacad ka aheyn la dagaalanka Al-Shabaab, oo ayagu sheegay in abaabulkooda ciidan uga dan leeyihiin la dagaalanka argagixisada.
Sidoo kale waxa uu ugu baaqay hogaanka Ahlu-Sunna oo ugu horeeyo Sheekh Shaakir in xilka ay raadinayaan u soo maraan waddo sax ah, islamarkaana la karaameyn doono, maadama ay tallada wax ku leeyihiin, sida uu sheegay.
Previous articleWar tollow, dhagarta reer tolkeen miyeynaan waxba ka baran???????
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulamo looga hadlayo doorashooyinka ka bilaabay Baraawe
Milateriga Kenya iyo hay’adaha samafalka oo billaabay inay gargaar cunto gaar...
Wararka ka imaanaya Kenya gaar ahaan waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in halkaas ay ka jirto abaar xoogan oo saamaysay dadka iyo Duunyada. Wararka...
Prof Cabdi Ismaaciil Samatar. Oo ka mid noqday kuraasta Aqalka Sare ...
Boqolaal muhaajiriin ah oo u tahriibayey Yurub oo lagu qabtey dalka...
Dabageed: “Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Baladweyne wuu tagaa”.
Maxaa ku soo kordhay Dagaaladii ka dhacay Duleydka dhuusamareeb
Al-Shabaab oo goob fagaare ah ku toogatay nin ay ku eedeeyeen...
Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Galmudug oo la xaliyay gadoodkii ay...
Caawa Magaalada Guriceyl oo aloow sahal ah iyo Odoyaasha CEYR...